तिमीले दिएको माया | जिन्दगीको पानाहरु
Girls - Soccer Girls Fans of FIFA World Cup 2010
तिमीले दिएको माया
Posted on नोभेम्बर 30, 2010 by jpana
निर्देशक विजय केरुङको निर्देशनमा चलचित्र ‘तिमीले दिएको माया’ को निर्माण हुने भएको छ । गत साता एक कार्यक्रमबीच मुहूर्त गरिएको उक्त चलचित्रका निर्माता सुनिता शर्मा तथा रेशा ढुंगाना हुन् । चलचित्रमा राज तिमिल्सिना, युना उप्रेती, सुवास मेचे, दीक्षा भण्डारी, सुनिल थापा, रामचन्द्र अधिकारी आदि कलाकारको मुख्य भूमिका रहनेछ ।
चलचित्र ‘नाइँ नभन्नु ल’का निर्माता रमेशजंग रायमाझीले निर्माण गरिरहेको चलचित्र ‘मलाई मनपर्‍यो’का बाँकी रहेका दुई गीतको छायांकन बैंककमा हुने बताइएको थियो, तर अब ती दुई गीतको छायांकन रारातालमा गरिनेछ । त्यसका लागि छायांकन युनिट चार्टर्ड गरिएको हेलिकप्टरमा राराताल पुग्ने भएको छ । भद्र भुजेलले निर्देशन गरेको यो चलचित्रमा राजबल्लभ कोइराला, निरुता सिंह तथा जीवन लुइँटेलको मुख्य भूमिका छ ।
हेटौँडामा तामाङ चलचित्र महोत्सव
तामाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको मकवानपुरको हेटौंडामा तामाङ चलचित्र महोत्सव-२०६७ हुने भएको छ । तामाङ भाषाका चलचित्रलाई गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले नेपाल तामाङ चलचित्र संघले आउँदो पुस २ र ३ गते हेटौँडामा महोत्सव गर्न लागेको हो । नेपाल तामाङ चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रकाश ब्लोनको अध्यक्षतामा हेटौँडामा सम्पन्न छलफलले हेटौँडामा महोत्सव गर्ने निर्णय भएको हो । महोत्सव सफल पार्न नेपाल तामाङ घेदुङ मकवानपुरको संयोजन मकवानपुरमा रहेको तामाङ गुठी तथा तामाङ संघसस्था सदस्य रहने स्थानीय उपसमिति गठन भैसकेको छ ।
२०५२ सालमा कलाकार जयनन्द लामाले पहिलो तामाङ चलचित्र सेम्री छोरङान निर्माण गरेका थिए । अहिलेसम्म नेपालमा झन्डै ४० वटा जति तामाङ चलचित्र निर्माण भैसकेका छन् । यो वर्ष १० वटा तामाङ चलचित्र निर्माणको क्रममा रहेको अध्यक्ष ब्लोनले जानकारी दिए ।
नेपाली चलचित्रमा द्वन्द्वकलाको जग बसालेका द्वन्द्व निर्देशक, कलाकार तथा सेट डिजाइनर गोपाल भुटानीको निधन भएको छ । काठमाडौंको जनमैत्री अस्पतालमा उपचारका क्रममा भुटानीको मंगलबार बिहान एघार बजे निधन भएको हो । ७८ वषर्ीय भुटानी पेटको क्यान्सरबाट पीडित थिए । शरीरमा क्यान्सरको संक्रमण बढ्दै गएकाले उपचार हुन नसक्ने भन्दै भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालबाट केही साताअघि उनलाई डिसचार्ज गरिएको थियो । त्यसपछि उनको रक्तचाप निकै बढेको थियो । भुटानीको पार्थिव शरीरलाई मंगलबार बेलुका स्वयम्भूमा बौद्ध परम्पराअनुसार दाहसंस्कार गरिएको छ । उनका चेला तथा द्वन्द्व निर्देशक राजेन्द्र खड्गीले भुटानीको शवमा दागबत्ती दिएका थिए । भुटानीले डेढ सयभन्दा बढी चलचित्रमा काम गरेका थिए । भारतीय चलचित्र उद्योगमा पनि काम गरेको अनुभव संगालेका उनी पछिल्लो पटक उनी ‘मिहो’ चाउचाउको विज्ञापनमार्फत चर्चामा आएका थिए ।
भुटानी सिने एवार्ड
द्वन्द्व कलाकार संघले मंगलबार चलचित्रका द्वन्द्व निर्देशक, कलाकार तथा सेट डिजाइनर गोपाल भुटानीको स्मरणमा गोपाल भुटानी सिने एवार्डको स्थापना गरेको छ । संघका अध्यक्ष योगेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार हरेक वर्ष नेपाली सिनेमामा उत्कृष्ट योगदान पुर्‍याउने व्यक्तित्वलाई प्रदान गरिने उक्त पुरस्कारको राशि एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछ । श्रेष्ठका अनुसार स्व. भुटानीको स्मरणमा एउटा गैरसरकारी संस्थाको स्थापना गर्ने तयारी पनि भैरहेको छ । स्व. भुटानीले नै नेपाली चलचित्रमा द्वन्द्वकलाको सूत्रपात गरेका हुन् ।
बाबुराम ढकालको लेखन तथा निर्देशनमा चलचित्र ‘दुलही’ को छायांकन प्रारम्भ भएको छ । गत मंगलबार चितवनबाट थालिएको उक्त चलचित्रको छायांकन ४५ दिनभित्र सकिने ढकालले जनाएका छन् । जसमा ३० दिनको सेड्युल चितवनमा राखिएको छ भने बाँकी काठमाडौं तथा पोखरामा गरिनेछ । ओएसआर फिल्मसको ब्यानरमा निर्माण हुने चलचित्र दुलहीमा राजेश हमाल, करिश्मा मानन्धर, मुकेश ढकाल तथा सुमिना घिमिरेको मुख्य भूमिका छ ।
चलचित्रका विद्यार्थीहरूको ओरिएन्टेसन
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नेपालको एक मात्र चलचित्र विषयमा स्नातकसम्मको अध्यापन गराइने ओस्कार इन्टरनेसनल कलेजका नवआगन्तुक विद्यार्थीर्ह रूको ओरिएन्टेसन कार्यक्रम गतसाता सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा चलचित्र निर्देशक यादव खरेल, कलाकार हरिहर शर्मा, निर्देशक लक्ष्मीनाथ शर्मा, छायांकार दीपक ढकाल, साउन्ड इन्जिनियर प्रदीप उपाध्याय आदिले चलचित्र अध्ययनका ’boutमा बताएका थिए । कलेजका प्रमुख चलचित्र निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाले यो शैक्षिक सत्रका लागि ४० जना विद्यार्थी चलचित्र विषय अध्ययन गर्न तथा भर्ना हुनुलाई उत्साहजनक बताए ।
नायक राजेश हमाल पर्दामा हास्य नायकका रूपमा देखिने भएका छन् । निर्देशक विजय विक्रम बस्नेतको निर्देशनमा निर्माण हुन लागेको हास्य चलचित्र ‘हात लाग्यो शून्य’मा नायक हमाल हास्य भूमिकामा देखा पर्दैछन् । गत साता शुभमुहँर्त गरिएको उक्त चलचित्रको मुहँर्तमा हमाललाई हास्य अभिनेता किरण केसी धुपबत्ती बालेर पूजा गरेका थिए । हमाल बिना नेपाली चलचित्रको भविष्य नहुने र उनी नै महानायक भएकाले पूजा गरिएको केसीले बताए । चलचित्रमा राजेश हमाल, किरण केसी, झरना थापा, गोपाल ढकाल आदि कलाकारहरूको मुख्य भूमिका रहनेछ ।
Filed under: मनोरन्जन | Tagged: फिल्मी खबर |
« How To Hack Facebook Passwords ? बाटोमुनिको फुल »